र्‍यापिड टेस्टिङ किट ठीक छ वा छैन भनेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जाँच गर्ने – Sudarshan Khabar
सरकारले सात करोड रूपैयाँ बढी खर्च गरेर चीनबाट १५ मिनेटमै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षण गर्ने र्‍यापिड टेस्टिङ किट किनेपछि यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। लगत्तै सरकारले यो किट ठीक छ-छैन भनेर जाँच्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई जिम्मा दियो।
तर यो जिम्मा आइतबार फेरि परिषदबाट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दिइयो।
परिषद अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले भने, ‘आजको छलफलपछि यसको भ्यालिडेसनको काम जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्ने भयो। परिषदले अनुसन्धान पनि गर्दै जान्छ र उहाँहरूलाई चाहिएको सहयोग पनि गर्दै जान्छ।’
आइतबार यही टेस्टिङ किट कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो।
यसको ‘भ्यालिडेसन’ कसरी गर्नेबारे जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बोल्न चाहेन। निर्देशक डा. रूना झाले यसबारे सबै मन्त्रालयले नै बताउने जनाइन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले आफू छलफलमा सहभागी नभएको भन्दै यसबारे धेरै कुरा थाहा नभएको बताए।
सुरूमा यसको जाँच जिम्मा पाएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसन्धान शाखा प्रमुख मेघनाथ धिमालका अनुसार प्रयोगशालाले यो किटसँगै बजारमा भएका करिब पाँच वटा जति किटको परीक्षण गर्नेछ। त्यसका लागि प्रयोगशालाले झन्डै सयभन्दा बढी व्यक्तिको र्‍यापिड टेस्ट गर्नसक्छ र फेरि त्यसलाई ठीक छ-छैन भनेर पिसिआर विधिबाट जाँच गर्न प्रयोगशालामा परीक्षण गर्छ।
परिषदकै एक सदस्यका अनुसार चीनबाट ल्याइएको किटको ‘सेन्सिटिभिटी’ ८४ प्रतिशत छ। यो भनेको सय जना पोजेटिभ संक्रमण भएका व्यक्तिको जाँच गर्दा ८४ जनाको मात्र पोजेटिभ देखाउन सक्छ। बाँकीको नतिजा गलत देखाउन सक्छ।
यही कुरा जाँच गर्न प्रयोगशालाले किटको ‘भ्यालिडेसन’ गर्दैछ। सरकारले यसअगाडि नै किटले काम नगरेको अवस्थामा फिर्ता गरिने जनाएको छ।
यसअघि नै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले काम नगरेको अवस्थामा फिर्ता गर्न सकिने सर्तमा किनिएको बताएका थिए।
खासगरी चीनबाटै किनिएका यस्ता किटले काम नगरेको भन्दै स्पेन लगायत केही युरोपेली मुलुकले किट चीनमा फिर्ता गरेका थिए। मन्त्रालयले भने चीन सरकारले अनुमति दिएको कम्पनीबाटै किट किनेको बताएको छ।
फेरि यो किटले काम गरेको अवस्थामा धेरै मानिसमा परीक्षण गर्ने प्रभावकारी रहने विज्ञहरूको तर्क छ। यो किटले १० देखि १५ मिनेटमै परीक्षणको नतिजा दिन सक्छ। जुन अहिले भइरहेको पिसिआर विधिबाट सम्भव हुँदैन। पिसिआरबाट नतिजा आउन कम्तिमा पनि ८ घन्टा लाग्छ।
सरकारले तत्काल कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङमा परीक्षण गर्ने भनेको यही किट प्रयोग गरेर हो। मन्त्रालयले टोली तोकिएको ठाउँमा आइतबारै परिचालित भएको बताएको छ।
सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरका क्वारेन्टाइनमा भएका सबै व्यक्तिको यो विधिबाट परीक्षण गर्ने भनेको छ। साथै ती जिल्लामा चैत महिनामा विदेशबाट आएकाको पनि परीक्षण गरिने भनिएको छ।
सरकारले बाग्लुङमा रहेका दुई जना संक्रमितका छरछिमेकको पनि परीक्षण गर्ने भनेको हो।